रोनाल्डो बने फिफा वर्ष खेलाडी - New York Samachar
काठमाडौं, ७ कार्तिक । पोर्चुगल र रियल म्याड्रिडका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यो बर्षको फिफा बर्ष खेलाडि अवार्ड जितेको छन् । रोनाल्डोले फिफा बर्ष खेलाडिको अवार्ड जितेको यो पाँचौ पटक हो। फिफा ब्यालन डो’रबाट फ्रान्स फुटबलले हात निकालेपछि फिफाले ‘द बेष्ट’ नामाकरण गरेर नयाँ उपाधिको थालनी गरेको दोस्रो बर्ष पनि रोनाल्डोले नै सफलता हात परेका छन्।
यसपटक अवार्ड जित्ने क्रममा रोनाल्डोले बार्सिलोनाका लियोन मेस्सी र पिएसजीका नेयमारपछि पारेका छन् । रियलले गत बर्ष च्याम्पियन लिग र ला लिगा उपाधि जित्दा रोनाल्डोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व फरवार्ड रोनाल्डोको नेतृत्वमा आगामी बर्ष हुने फिफा विश्वकपमा पोर्चुगल छनोट भैसकेको छ ।
फ्रान्स फुटबल र फिफाले सन् २०१० देखि संयुक्त रुपमा दिदैं आएको फिफा ब्यालन डो’रमा फ्रान्स फुटबलले हात निकालेपछि फिफाले ‘द बेष्ट’ नामाकरण गरेर गत बर्षबाट नयाँ उपाधिको थालनी गरेको हो।
कुन विधामा कस्ले उपाधि चुमे ?
‘द बेष्ट’ पुरुष खेलाडी: क्रिस्टियानो रोनाल्डो
‘द बेष्ट’ महिला खेलाडी: लिके मार्टिन्स (नेदरल्याण्ड)
‘द बेष्ट’ पुरुष प्रशिक्षक: जिनेदिन जिदान (रियल म्याड्रिड फुटबल क्लब)
‘द बेष्ट’ महिला प्रशिक्षक: सरिना विग्मन (नेदरल्याण्ड)
‘द बेष्ट’ फिफा गोलकिपर: जियानलुइजि बुफन (ईटाली र युभेन्टस)
फिफा फेअर प्ले अवार्ड: फ्रान्सिस कोने (टोगो)
फिफा पुस्कास अवार्ड: ओलिभर जिरुड (फ्रान्स र आर्सनल)
फिफा फ्यान अवार्ड: सेल्टिक फुटबल क्लब
फिफा विश्व ११: बुफन, बोनुचि, रामोस, मार्सेलो, आल्भेस, मोद्रिच, ईनिएस्टा, क्रुज, मेस्सी, रोनाल्डो, नेयमार
डिपिएल क्रिकेटमा सुनको जुत्ता पुरस्कार !
काठमाडौं, १२ चैत । आगामी चैत १७ गतेबाट हुने दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल–२) को मोष्ट भ्यालुएबल खेलाडीले नेपाली जुत्ताको ब्राण्ड गोल्डस्टारको सुनको जुत्ता पाउने भएका छन् । डिपिएल आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) र गोल्डस्टार जुत्ताको किरन सुज
काठमाडौं, १० चैत । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलमा सुपर सिक्स चरणका खेल समाप्तीसँगै विश्वकपमा खेल्ने १० राष्ट्रको टुंगो लागेको छ । सुपरसिक्सको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानले आयरल्याण्डलाई पराजित गरेसँगै उसले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो ।
काठमाडौं, १० चैत । विश्वकप तयारी स्वरुप शुक्रबार राति भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना र पोर्चुगल विजयी भएका छन् । खेलमा साविक विश्वकप विजेता जर्मनी स्पेनसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । स्पेनका रोड्रिगो मोरेनोले टोलीलाई
बडी बिल्डिङको अध्यक्षमा विक र महासचिवमा बज्राचार्य
काठमाडौं, ३ चैत । हिमालय किङडम नेप्लिज फेडेरेसन अफ बडी बिल्डिङ एन्ड फिट्नेसको अध्यक्षमा शिव लामिछाने विक निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संघको पहिलो साधारणसभाले विकको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति समेत निर्विरोध चयन गरेको हो ।
नेपाललाई ऐतिहासिक उपलब्धि, क्रिकेटमा एक दिवसीय मान्यता
काठमाडौं, चैत । नेपाली क्रिकेट टोलीले इतिहास रच्दै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ । विश्वकप यात्रा टुंगिए पनि आईसीसी विश्वकप छनोटको पहिलो प्लेअफ खेलमा नेपालले पपुवा न्यूगिनीविरुद्ध शानदार जित हात पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाउन सफल भएको हो